GORFEYN: Marxaladdihii ay Soo martay Dacwadda Badda Soomaaliya & KENYA “DHIBTA ADAG”
October 11, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 5
MUQDISHO(P-TIMES) – Soomaaliya dacwada Badda waxay gudbisay August 2014, Maxkamadda Cadaalada Adduunka, Maxkamadduna waxay fadhigii koowaad yeelatay 19 September 2016-kii,kaas oo ay Kenya horgeysay dood culus oo ah in maxkamaddu aysanba awood u laheyn qaadida dacwadan, ayna difaaceeda madasha ka jeedisay.
Taas oo caqabad noqotay, balse dal-ba waxa laga qaaday damanad-qaadka ku kalsoonaanta go’aanka maxkamadda oo ay ka horjeediyeen maxkamadda, waxaana labada dhinac u kala hadlay labo xubnood oo Qareeno ah.
Weerar & weerar celis gudaha Maxkamadda ay isku dhaafsadeen Fadhigii koowaad Soomaaliya & Kenya Qareenada kala matalayay ayaa ahayd mid adag oo xasaasi ahayd.
2 Feb, 2017-kii, Maxkamadda ICJ ayaa ku dhawaaqday xukunkii 1aad oo u hiilinayay Soomaaliya, waxayna daaha ka rogtay in ay awood u leedahay qaadida dacwadan, waxay ahayd dhabarjab weyn oo soo gaaray Kenya, waana halka la rumeysan yaahy in ay ka bilaabatay kufitaanka Kenya.
Dhabarjabkaas ka dib, Soomaaliya waxaa ka dhacay isbedelka xagga hoggaanka ah, balse Isbedel kuma imaan hanaanka socodka dacwada gabi ahaanba, Kenyana waxay sii wadey ka cararka miiska Cadaaladda, Waxay 4 jeer ka war-wareegtay imaanshaha maxkamadda horteeda, 3 jeer ayay heshay fursado dib loogu dhigay doonisteeda 2 jeer oo kala ah September iyo October sannadkii 2019-kii iyo May 2020, taas oo ay Soomaaliya u muujisay dulqaad xoog badan, xili waliba siyaasiinta Soomaalida ku dhaliilayeen Madaxtooyada Soomaaliya in ay gaabis sameynayso.
Laakiin, March 2021 Kenya dhabarka ayay jeedisay, weyna imaan weyday fadhiga Maxkamadda ee kama dambeysta ahaa, waxay xiligaas soo qadintay, marmarsiiyana ka dhigtay in markale dib loogu dhigo, maadaama ay ka maqan yihiin Cadeymo muhiim ah oo aysan uga maarmin dacwada, sidaas oo kale xogo ay ka xadeen Sirdoonka Soomaaliya, Qareenadeedii ay horey ugu kalsoonaydna waxay ugu yeertay kuwa dal ay is hayaan u shaqeynayay, laakiin dhammaan doodaha Kenya maxkamaddu ma aqbalin, weyna dhageystay hadaljeedintii darafka Soomaaliya.
Allaha u raxmadee Budhigihii Dacwaddan qeybta weyn ku lahaa Eng, Maxamed Cumar Saalixi oo dhawaan geeriyooday ayaa maxkamadda horteeda ka akhriyey Gorfeyntii xagga sharciga ee Soomaaliya, march 2021-ka, isagoo ay kahoreeyeen Garyaqaanada ajnabiga ah ee difaacayay Soomaaliya.
Waxaan indhaha saaray Dekada Kismaayo qeybta aay ku lahaayeen ciidankii badda ee Soomaaliya oo aay ku xiranyihiin, 10 maraakiibta yar yar ee Xeebaha ilaaliyo oo aay Saaran yihiin, qoryaha yar yar ee Diyaaradaha lagu caabiyo ee SUUGA aay Soomaalida u taqaan iyo ugu yaraan 2 markab oo kuwa waaweyn oo qaarkood aay saarayihiin, illaa 6 qori oo dhinacyo kala duwan kaga rakiban oo PM ah iyo qoriga weyn ee lidka Diyaaradaha ee loo yaano, 100mm ama (JANTE)!
maraakiibtaas oo u xil saarnaa, ilaalinta Xeebaha Koofureed ee Soomaaliya. Laga billaabo, Baraawe oo 250km dhanka Muqdisho ka Jirto Kismaayo iyo Raaskaambooni oo 270km dhanka koofureed ka xigta oo ah xadka Kenya!
Iska daa in aay Kenya u soo hawooto bad aay Soomaaliya leedahaye, marka uu layrka Mombasa u muuqdo Maraakiibta dagaalka ee Soomaaliya ayaay Kenya ka baryi yirtay in aay dib oga noqdaan, iyadoo is gaabineeysa!!!!
Maantana Waxaan joognaa, Kenyadii noocaa ahayd oo aay maraakiibteeda ku xiranyihiin dekaddii Kismaayo oo u xusul duubeeysa in aay qaadato, guud ahaan badda ku beegan Jubaland oo dhan 300km!!
Rabbi run buu inoo sheegay markuu Qur’aankiisa ku yiri, Qoom Ilaah ma dulleeyo, illaa aay iyagu naftooda is dulleeyaan marka hore! Waana xaalka aay Soomaalida maanta ku sugantahay!!
Waxaase dareemi karo Qalbi jabka iyo uur ku taalaada aay labadaa marxaladood kala leeyihiin, qofkii labaduba la kulmay!!!!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Waryaa ILKAYAR naga aamus…
SOOMAALI ILAAHNA WAA LEEDAHAY, RAGNA WAA LEEDAHAY…. Adi HABLAHA yadh yadh sida loo dilo oo loo kufsado lee taqaaneen.. IKRAAAAAAAAAAAM baa ugu dambeeysay… XAAR FARMAAJO aa dilay..
Badda aad ka hadleeyso rag baa soo dhiciyey…
Kow, waxaanu u mahad celinaynaa CABDISHAKUUR iyo CUMAR CABDIRASHIID SHARMAARKE..
Labo, waxaanu u mahad celinaynaa XASAN SHEEKH MAXAMOUD oo geeyey dacwada ICJ.
Saddex: waxaanu u mahad celinaynaa AV. CABDI QAWE, EX-PRESIDENT OF ICJ. Waa wiil ku dhashay EYL, ee PUNTLAND
XAAR FARMAAJO, 7 JIIR uu dib u dhigay dacwada… hase yeeshee, SOOMAALI WEYN aa ka hadhi weyday..
Maxaan kala doodaa LABEEB aay labo LABEEB iska dhaleen oo kalsooni darro haaysato darteed garan la’ cid uu sheegto iyo Lahjed uu ku kalsoonaado oo ummado kale magacooda dhaamaya!!!!
.Mujaahid SNM says:
Haddaanu Irir Samaale nahay wax naga galay ma jirto dhulka Ogaadeen ee NFD iyo badda la sheegayo wiilna noogama dhimanaayo.
Waxaan halkaan uga digayaa dhalliyarada Irir Samaale in aan wax been lagu abuubulin oo ay gartaan waxa ay danteenu tahay.Danteenu waxay tahay siduu Irir Samaale Geeska Afrika uga noqonlahaa Boqorada Geeska Afrika.
Annagu haddaanu nahay Irirka dega Somaliland waxaan ku guuleysanay in aan Sool gacanta uga dhigno Daaroodkii degenaa..waxaan 25 km u jiraa tuulada gadhoowe.. Waxaan sidaas si mid ah ka dooneynaa in Irirka degan Mudug ay si rasmi ah ula wareegaan dhammaan Gobolka Mudug.
Ka dibna waxaan u soo jeesanaynaa sidii Jubbaland gacanteena dib ugu soo noqonlaheed.Ma ahan wax aan ogolaankarno in wiil ka yimid qoraxeey ama gadhoowe ama buuhoodle ama garbahaareey uu ku amar ku taagleeyo Wiilasha Irir Samaale ee Gaaljecel, Biyomaal,Sheekhaal, Cawrmaleh, Wardeey oo degaanka iska leh, this is unacceptable.
KENYA DHULKA SOMALIDU WAA LAWADAGTAA DHULKA MARKII HORE muslim XAKUMI JIRAY BARQASH SULDANKII ZINJIBAAR MIN MUQSDISHOW ILAA BRUUNDI kukuyada waxeet ka timid laga vigtorya SOMALIDU BADA WAXBA KA MA AQOOONJIRIN hadana aqoon umalaha qeey ladoodi ayaa laga fariisawaaye WAAba KA CARARI JIRA BAQDIN DARAADE LAAKIIN MAJEERTEENKU BAD XERFAD WEEN AYEE ULAHAYE SIRTA BADA WAXEEY AHEEDA LIX BILOOD dabeesh waxeey aada galbeed lixd bilood waxeey aad bari marka doonyaha mator malaheeyn(pro waxeey lahaayee shiraac dabeessha galbeed riixi jirtay markeey aadayaan zinjibaar markakale la aaday baargaal,cumaan, indya debeesh bari(SHARQI)ayaa doonya wadijirtay sirtaas waxaa ogaaday Vasko dagaama oo aha portogees gaalo dhan markaas ilbexeen oo zingibaar lagaqaaday iyo dhamaan dhulkii muslinku xakumaayee.Waxaan uga danleeyahay walaala somalia biri yeeyaan dabaal deegin markii la yiraado somali baa badii loo xakumay hadaad dabaal deegtaan waa laidin dilin wana laydin tarxiilin dowlaad kenya mareekan iyo hingris ayaa ilaashada kheeraadka aad sheegeesaan oo leedihin badu ceegaaga hadeey rabaan ayaaga xuduuka jooga beey riig(DRILIG)toos(VERTICAL)uqoda markeey gaaran mesheey rabeen ayee leexin ilaa lagaaro ceelaha badroolka somalida turbine michine ayaa laguxiraan saas ayee udhuuqin adoole bada somaliya waa muqadas. KUwit iyo Ciraaq dagaal koodu saas ku dhacay.QADAR ayaa IRAAN dhulkaas ka xaday markaas qadar tiri dhulka anga leh laakiin qota faaiidada aan wadaagno iraan ok ayee tiri walaalyow ha buuqin kenya gudaheeda